Kenya oo Kordhisay Duqeymaha ay La Beegsato Dadka Shacabka ah+Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Kenya oo Kordhisay Duqeymaha ay La Beegsato Dadka Shacabka ah+Dhageyso
Gobolka Gedo oo kamid ah gobolada dhaca koofurta Somalia islamarkaana hoostago dowlad goboleedka Jubbaland, waxaa soo badanaya oo isi soo taraya duqeymaha ay ka fulinayaan diyaarado ay leeyihiin ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowg Africa ee Amisom.
Kenya ayaa duqeymaha ay diyaaradaheedu ka geystaan gobolka Gedo waxa ay la beegsataa deegaano ay ku nool yihiin dad shacab ah balse ka arimiyaan dagaalyahanada Al-Shabab,duqeymahan waxa ka dhasho khasaaro nafeed iyo mid hantiyayeed, waxaana inta badan uu khasaaarahaas soo gaaraa dadka shacabka ah.
Saacadihii hore ee arbacada maanta ah iyo habeenimadii xalay waxaa ay ciidamada Kenya duqeymo hor leh ka fuliyeen deegaanka Busar ee gobolka Gedo,ciidamada kenya ayaa bilo kahor isaga baxay deegankan waxaana hadda ka arrimiya dagaalyahanada dagaalyahanada Al Shabab.
Abdifitaax bare Yuusuf oo ah Taliyaha dowladda ugu magacaaban deegaanka Busar ayaa sheegay in duqeymaha ay fulinayaan ciidamada Kenya ay kordheen tan iyo markii ay ciidamada Kenya isaga baxeen deegaano ay kamid yihiin Busar, fafax dhuun iyo ceel cadde oo hoos taga gobolka Gedo.
Ciidamada Kenya ee qeybta ah howgalka Amisom ayaa sanadkii 2011 fasax la’aan kasoo talaabay xadka ay wadaagaan dalalka Somalia iyo Kenya, waxaana ay saldhigyo ka sameysteen gobolada jubbooyinka iyo Gedo oo hadda la isku yiraahdo Jubbaland.
Ciidamadaan ayaa tacaddiyo joogto ah kula kaco dadka rayidka ah ee ku nool gobolada ay kaga sugan yihiin Somalia.